China Pump Rubber Mberi Liner Pfeka Zvikamu fekitori nevatengesi | YAAO
Kana uchipomba hasha slurries hausi iwo mubvunzo wekuti iwe uchazoda slurry pombi spares uye kupfeka zvikamu - iwo mubvunzo wekuti riini. Nesystem dzakazara dzakabatana uye sosi imwechete yekupa mhinduro isu tinorerutsa kuverenga, kugovera uye kumisikidza kwemasurry pombi zvikamu uye zvikamu zvekuchengetedza macustomer edu achimhanya kwenguva yakareba, yakachengeteka uye zvine hunyanzvi.
YAAO inogadzira ese ekutsiva slurry pombi zvikamu izvo zvakakwana zvakakwana kune Warman uye nezvimwe OEM slurry pombi zvikamu.
Izvo zvikamu zvepururry pombi zvinogona kuiswa munzvimbo nhatu huru: slurry pombi yakanyorova zvikamu, chisimbiso kurongeka zvikamu, kutyaira kurongedza zvikamu, saka yedu slurry pombi zvikamu zvakaiswa muboka zvinoenderana nekufunga uku.
Tobee's foundry inzvimbo yakatwasanuka, ine dhizaini, dhizaini yekugadzirira, kuumba, kurasa, kupisa kupisa, kugadzira uye kusangana. Tinogona kuvimbisa mutengi kunyatso kukodzera kana zvikamu zvikaiswa mumafomu eOEM aripo uye achashanda zvine hunyanzvi uye zvemagetsi sekugadzirwa neOEM.
YAAO inopa yakakura yakakura slurry pombi zvikamu zvinosanganisira impellers, volute liners, huro gwenzi, furemu ndiro liner yekuisa, vanodzinga, pombi makesi, akatakura gungano etc.
Iyo yerabha yakanyorova zvikamu zvakakurisa kupfeka kuramba uye ngura kuramba, inowanzo shandiswa kune acid inoshanda mamiriro. Zvakadai tailing mune yekuchera indasitiri, slurry ine zvidiki zvidiki uye isina yakaoma micheto. Chikamu chese chinofambisa chinosanganisira Cover Plate Liner, Huro bushing, Frame ndiro liner, Furemu Plate Liner Isa. Iyo yerabha yekuchengetedza zvikamu zvakagadzirwa ne Natrual Rubber, kodhi iri R55 uye R38, iyo gurantees kugona kwakanakisa kusanganisira kupfeka kuramba, kemikari kuramba, isina mvura uye yakakwira kushanda tembiricha renji kubva -40-75.
Iyo Rubber impeller chiyero yakafanana neiyo Yakakwira Chrome Alloy Impeller. Isuwo taigona kupa Rubber Slurry Pump ne Metal Impeller. Impeller ndiyo inonyanya kukosha zvikamu zveCentrifugal Slurry Pump. Mapombi eCentrifugal anoda impeller kuti agadzire iyo centrifugal simba iyo inogadzirisa iwo slurries. Iko centrifugal simba rinogadzirwa nemhepo kana ichimhanya kune imwe kumhanya.
Rubber Pump Liners - Nyore dzinogona kuchinjika dzakasungwa, kwete kunamirwa, kune iyo casing yekubatanidza kwakanaka uye nyore kwekuchengetedza. Yakaomarara simbi liners inonyatso kuchinjika neyakaomeswa akaumbwa elastomers. Elastomer chisimbiso zvindori kumashure ese liner majoini.